AbakwaTLEE Spas baveza iphrojekthi yakamuva: iWillowbrook Spa eLake House eCanandaigua
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Amahhotela nezindawo zokungcebeleka » AbakwaTLEE Spas baveza iphrojekthi yakamuva: iWillowbrook Spa eLake House eCanandaigua
Health News • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • emihlanganweni • Izindaba • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
I-Willowbrook Spa eThe Lake House eCanandaigua
I-TLEE Spas, okuyinkampani eyakha umhlaba wonke yokuthuthukisa izindawo ezinomklamo wobungcweti, indlela eqhutshwa ngokungenisa izihambi, ihloniphekile ukwethula iWillowbrook Spa, esanda kuvela e-The Lake House eCanandaigua, ihhotela kanye ne-spa eklanyelwe indawo yokuhlala kanye ne-spa ku-Finger ebabazekayo Amachibi aseNew York. Indawo entsha yokuhlala kahle ithola ugqozi kusuka endaweni yayo eyisakhiwo sodumo echibini kanye nobuhle obungacwengekile beFinger Lakes, edume ngokubukwa okufanele amakhadi eposi amachibi namagquma aqengqelekayo futhi njengesifunda sezolimo esinothile emlandweni wendawo.
Indawo entsha yokuhlala kahle ibuyisela futhi ivuselele ngama-saunas ase-creekside kanye nokwelashwa okwenziwe ngezifiso.
ILake House ithole ukuqashelwa kuhlu olushisayo lweCondé Nast Traveler's 2021 njengenye yezinto ezintsha ezihamba phambili: amahhotela emhlabeni, amahhotela asimeme emhlabeni, amahhotela ase-US naseCanada, namahhotela emvelo emhlabeni jikelele.
I-Willowbrook Spa igcwalisa i-vibe yehhotela ngokufinyelela ngqo engadini eluhlaza, echibini elinokuthula nezindlela zokwelashwa.
Ngenkathi iLake House ivulwa ehlobo eledlule, ngesikhathi sobhadane lwe-COVID-19, ukubuyela ekuhambeni kwesifunda kanye nezokuvakasha ezihamba kancane kwaveza ukubhebhana okukhulu kwendawo, lapho izikhala zangaphakathi nangaphandle zigobhozela ngokwemvelo futhi zakha okwasemuva okuhle kwezinkumbulo zempilo yonke. Okusanda kufakwa kuTravel + Leisure's It List 2021, ukukhethwa kwamahhotela amasha ahamba phambili emhlabeni, iThe Lake House nayo yathola ukuqashelwa kuhlu olushisayo lwaseCondé Nast Traveler's 2021 njengamanye amahhotela amasha kakhulu emhlabeni, okuhle kakhulu esimeme amahhotela emhlabeni, amahhotela amasha ahamba phambili e-United States naseCanada, namahhotela emvelo amahle kakhulu emhlabeni jikelele. Ukuhambisa indawo enhle yemvelo, iWillowbrook Spa igcwalisa ubuhle behhotela obuhle, obulula nokufinyelela ngqo engadini enhle nasolwandle olunokuthula, kanye nokwelashwa okwenzelwe imigomo yezempilo yezivakashi.
"UWillowbrook Spa ulalela emuva ku-analogue yokugubha ukuxhumana kwabantu, ukuhamba kancane kwempilo, kanye nokuhlangenwe nakho kwangaphandle," kusho uLee. "Sisebenzisa ifilosofi yomphakathi wendawo nokuxhumana kwayo nomhlaba wemvelo ngomklamo we-spa, imikhiqizo ehlanzekile esebenzayo kanye nezinsizakalo eziqhutshwa yimiphumela."
Inhlanganisela yamathonya - kufaka phakathi indlela yokuphila kwewayini kanye nobuciko bokupheka - IWillowbrook Spa iyisisekelo semvelo sokuphila ngezindlela eziningi, kusukela ekunyakazeni okucabangayo phakathi kwezindawo ezizolile kuya ekwelashweni kwangaphandle nasemaphephelweni ngempelasonto. Njengoba isifunda seFinger Lakes saziwa nangokuthi yisifunda sewayini esiphambili oGwini olusempumalanga ye-United States, Izindawo zokuhlala ezengeziwe e-TLEE ibheke endaweni eyazi kahle, izwe lewayini laseCalifornia, futhi yafaka izinto ezisize ukuchaza leyo ndlela yokuphila ehlukile kulwazi olusha lwe-spa. Igumbi le-Sun yindawo yokuphumula efaka ukukhanya okuningi kwemvelo, ukuhamba komoya okusha, nemibono ekhuthazayo maqondana neSpa Garden, efaka ama-pods amathathu e-lakeview sauna anezimvula zangaphandle nezindawo zokuphumula ezakha isekethe lokugeza elihlukile le-al fresco kubantu ngabanye, imibhangqwana noma amaqembu amancane. Ngaphakathi kwezwe elizungezile, izinketho zokuhlala eziningi zinwebisa indawo yokuphumula ngaphandle, zinikeze indawo ephefumulelwe yokucabanga noma ibandla lezenhlalo eliphephile.
Ikhuthazwe ifa elicebile lokulima esifundeni, elinikeze ukuvuselelwa kwezolimo kwezithako zokupheka ezisezingeni lomhlaba kanye nokuvuselelwa kwemithi yokwelapha yemvelo, iWillowbrook Spa isebenzisa imithi yezitshalo ukukhuthaza impilo ephelele futhi ifaka neminikelo yokuqabula ephakeme ukukhulisa isipiliyoni sezivakashi. Imenenja ye-spa inikela ngokuhlangenwe nakho kohlobo oluthile, kufaka phakathi ukwelashwa kokunakekelwa kwesikhumba okwenziwe ngeseshini kanye nokusikishelwa kwesiginesha kwempahla okunikela ngamabili amasu anqunyiwe anamafutha afakwe ngamakhambi namakhambi asezinhlizweni ukugcwalisa ubuhlakani obunembile be umelaphi. Ngokuhlinzeka ngemisebenzi eyahlukahlukene ekhanga ngokulingana nama-novice kanye nama-die-hards ngokufanayo, iWillowbrook Spa imema izivakashi ukuthi ziphakamise impilo yazo enothile ngokushintsha, ukuvuselela kabusha, nokuvuselela kabusha ogwini olusezingeni eliphakeme lweCanandaigua Lake kuleli hlobo nokuwa.
Ngaphezu kweWillowbrook Spa, abakwaTLEE Spas basanda kuthuthukisa uhlelo lweThe Seawater Spa eGurney's flagship Montauk Resort, elungiselelwe ukuvulwa ngasekupheleni kuka-2021 empumalanga yeLong Island. Abakwa-TLEE Spas bagxile ekugxiliseni imodeli yenhlalakahle emithonjeni ekhethekile yamanzi olwandle nasendaweni ephambili yolwandle, lapho amandla okuphulukisa emvelo amanzi acebile amaminerali nomoya ofakwa usawoti eba phakathi nendawo. IWillowbrook Spa eThe Lake House kanye neThe Seawater Spa eGurney's Montauk izodlala indima enkulu ekuphakamiseni isipiliyoni sempilo ezindaweni zabo ezizungeze ulwandle kanye nolwandle, imema izivakashi ukuthi zenze ukuxhumana nemvelo ngaphakathi kwezindawo ezinempilo ezintsha ezibunjwe izici ezihlukile zesayithi nomongo wendawo .
Mayelana ne-TLEE Spas
I-TLEE Spas iletha izinga elingenakuqhathaniswa lothando, ubuchwepheshe kanye nokuzivumelanisa nezimo ekwakheni ama-spas ahlukile kanye nokuhlangenwe nakho kwempilo. Basondela kuphrojekthi ngayinye ngamehlo amasha, befuna izindlela zokukhulisa ibha nokuyihlukanisa, ngerekhodi eliqinisekisiwe lempumelelo ngokusebenzisa iqoqo lamaphrojekthi awine imiklomelo, amaklayenti anokuqonda kanye nemikhiqizo ehamba phambili. Ukuthola eminye imininingwane ngama-TLEE Spas, vakashela www.lolinweb.com .